Izincomo ezingcono kakhulu zochungechunge lwe-TV | Izindaba zamagajethi
Izincomo ezinhle kakhulu zochungechunge lwe-TV
Eminyakeni yakamuva sibonile inqwaba yabalingisi baseHollywood bethuthela kuthelevishini, ifomethi esedume kakhulu eminyakeni yamuva nje, sibonga ingxenye izindleko zokukhiqiza eziphansi Lokhu kuvumela ama-studio amakhulu ukuthi abeke engcupheni imali encane kuphrojekthi ngayinye, ngoba uma izethameli zingaphenduli kunguquko yokuqala, zingasula ngokushesha futhi zinciphise izindleko.
Kepha akuwona ama-studio amakhulu kuphela akhethe le fomethi, ngoba izinsizakalo zevidiyo ezisakazwayo kanjani I-HBO noma i-Netflix yiyona ebheja kakhulu kulokhu okuqukethwe. Izibonelo ezisobala zokuphumelela kwemikhiqizo yalezi zinsizakalo zingatholakala ku-Game of Thrones, Silicon Valley, Daredevil, Stranger things ...
Kulesi sihloko sizonikeza ezinye ze- uchungechunge oluhle kakhulu esingakuthola njengamanje ku-TV. Ngizamile ukumboza zonke izinhlobo nezinto ezithandayo, ngakho-ke kule ndatshana ungathola kusuka ochungechungeni lwamahlaya, ochungechungeni lwezinganekwane zesayensi, ngohlobo lochungechunge B, amaphoyisa, imfihlakalo, amandla angaphezu kwawemvelo, abalingiswa bamahlaya ...
1 Izincomo zochungechunge lwamahlaya TV
1.2 Umndeni wanamuhla
1.3 Indoda yokugcina emhlabeni / Indoda yokugcina emhlabeni
2 Izincomo zeSayensi Fiction TV
2.1 Izinto ezingaziwa
3 Izincomo zochungechunge lwe-Mystery / Fantasy TV
4 Izincomo zochungechunge lwe-TV olugqwayizayo
4.1 Insizwa yomndeni
5 Izincomo zochungechunge lwe-B / Gore TV
5.1 Ash vs Ububi Ofile
5.2 Kusukela kusihlwa kuze kuse: uchungechunge
5.3 Z Isizwe
6 Ukuncoma / Izincomo Zochungechunge lwe-TV
6.1 Mnu. Robot
6.2 I-Orphan Black
6.7 Kungene ezindaweni ezimbi
7 Izincomo zochungechunge lwama-Comic / Book TV
7.1 Ama-Agent kaMarvel we-SHIELD
7.3 ULuka Cage
7.4 Umdlalo wema-Throne
7.5 The Dead Ukuhamba
7.7 Gods American
8 Inguqulo Yangempela Ebhalwe phansi noma ebizwa nge-Spanish?
Izincomo zochungechunge lwamahlaya TV
Uchungechunge olumnandi lwamahlaya lapho kubonakala khona ukuthi iSilicon Valley isebenza kanjani ngokuthinta amahlaya. Kulo lonke lolu chungechunge sizobona ukuthi uRichard Hendricks ubesebenza kanjani kuhlelo lokusebenza olunikeza amazinga wokucindezelwa wevidiyo angajwayelekile, nge-incubator. Kulo lonke lolu chungechunge, okuyisizini yalo yesine njengamanje futhi olusakazwa ku-HBO, sizobona zonke izinkinga lo mdidiyeli okufanele abhekane nazo kanye neqembu lakhe ukuze afeze umsebenzi wakhe ngempumelelo.
I-Modern Family iwuhlobo oluthile lokuzikhethela lapho abalingiswa abaphambili behlala kusofa ukuze bakhulume nekhamera, belandisa ngemicimbi eyenzeka kuzo zonke iziqephu. Le mockumentary isikhombisa iziqephu ezahlukahlukene ezimpilweni zabalingiswa bayo. Njengamanje isizini yayo yesishiyagalombili futhi ivuselelwe omunye unyaka.
Indoda yokugcina emhlabeni / Indoda yokugcina emhlabeni
Ilukuluku lochungechunge lwethelevishini lapho asikhombisa khona ukuthi kanjani igciwane libulale bonke abantu emhlabeningaphandle kwabambalwa abakhethiwe abangenalo igciwane. Laba bantu bahlangana kancane kancane bakha umphakathi futhi basikhombisa ubuhle nobubi isimo esifanayo ebesingaba nabo. Njengamanje isizini yayo yesithathu futhi ivuselelwe isine.
Indaba yenzeka esitolo esikhulu esibizwa nge-Superstore lapho i izimo ezingapheli zokuhlekisa ezihlobene nokuphila kwansuku zonke bobabili abalingiswa nokusebenza uqobo kwesakhiwo. Njengamanje amasizini amabili okuqala asakazile kanti okwesithathu kuhlelelwe.
I-Big Bang Theory isibonisa impilo yama-geek 4, abathandi bencwadi yamahlaya, i-Star Wars, i-ComicCon... Ekuqhubekeni kochungechunge sibona ukuthi la mazwibela amane aqala kanjani ukwehlukana kancane neqembu lapho ekwazi ukuheha intshisekelo yabesifazane, okunye kokwesaba kwabo okukhulu. Njengamanje isizini yayo yeshumi futhi ivuselelwe enye futhi
Izincomo zeSayensi Fiction TV
Uma wayethanda i-The Goonies, lolu chungechunge luzokwenza ukhumbule isikhathi sama-80s lapho sisebancane futhi lapho okuwukuphela kwento ebibalulekile kwakungukuthola ukuzijabulisa. Izihambi Izinto ziyisipho kuma-80s lapho singabona khona izinkomba ezicacile kuma-greats embonini yamafilimu okwamanje njengoStephen King, uGeorge Lucas, uSteven Spielberg, uJohn Carpenter phakathi kwabanye.
uchungechunge Ikhuthazwe yifilimu enegama elifanayo yango-1973 futhi yadlalwa nguYul Brynner, lapho izinsiza zepaki lokuzijabulisa zigcwele ama-android avumela izivakashi ukuthi zingene ezweni lamaphupho, noma ngabe kungakanani ngokweqile. Phakathi kwabalingisi balokhu kulungiswa okusha sithola u-Anthony Hopkins no-Ed Harris njengezinkanyezi ezinkulu zaseHollywood.
Ngemuva kweminyaka engu-7 ilahlekile, iPrairie encane ibuyela emphakathini lapho ikhulele khona noshintsho oluphawulekayo: ubumpumputhe bakhe selaphekile. Ngaphandle kokubuza komndeni wakhe kanye ne-FBI, akekho noyedwa ongathola ukuthi kwenzekeni ngempela. Kepha ngenkathi uphenyo olwaholela ekwelapheni kwakhe luqhubeka, le ntokazi ifuna ukukholisa iqembu lentsha ukuthi liphinde lihlukane nomphakathi.
Umkhathi usithatha iminyaka engama-200 ukuya esikhathini esizayo, lapho uMiller engumphenyi wamaphoyisa okufanele athole uJulie Mao osemusha olahlekile. Njengoba uphenyo luqhubeka, uMiller uzothola ukuthi ukunyamalala kwale ntokazi kuzungu elizobeka engcupheni ubukhona besintu.
Izincomo zochungechunge lwe-Mystery / Fantasy TV
I-classic yesikhathi sonke engasoze yaphela ngesitayela. Kuzo zonke izinhlobo ezenziwe manje, le nguqulo ye-BBC nguyena onempumelelo enkulu, hhayi emphakathini kuphela, kodwa naphakathi kwabagxeki. Isizini ngayinye yakhiwa izahluko ezintathu zehora nesigamu (njengokungathi kwakungamabhayisikobho amathathu) lapho uSherlock kufanele axazulule izimfihlakalo abuzwe zona. Lolu chungechunge alunakho ukuqhubeka konyaka, okungukuthi, akuzona minyaka yonke izinkathi zalolu chungechunge ezethulwayo. Isizini yokugcina etholakalayo, eyesine, itholakala ngeNetflix.
Enye imfihlakalo yakudala, yize isizini yeshumi, ebone ukuhlangana kabusha kukaMulder noScully, kushiye kungathandeki, ngoba iziqephu eziyisithupha kuphela ezisakazile, ezintathu kuphela ezigxile qhubeka i-aura yemfihlakalo ezungeze uchungechunge phakathi kwabafokazi neminyakazo kahulumeni emnyama yokufihla yonke imikhondo. Amasizini ayisishiyagalolunye adlule awanayo imfucuza, ngakho-ke uma unethuba lokujabulela lolu chungechunge, ngeke uzisole.
I-classic yethelevishini eyaqala uhambo lwayo ngo-1969 esigabeni sokuqala yaphela ngo-1989. Isigaba sesibili salolu chungechunge lwaseBrithani saqala ngo-2005 kanti njengamanje sisesikhathini seshumi. Lolu chungechunge ilandisa ngokuzijabulisa kukaDokotela ehlola indawo yonke eTardis yakhe, umkhumbi-mkhathi okwazi ukuhamba ngesikhathi nasemkhathini.
Izincomo zochungechunge lwe-TV olugqwayizayo
Umndeni Womndeni Yilokho AbakwaSimpson Babengaba Kona ukube bebengagxilanga kuzo zonke izethameli. Uchungechunge lukaSeth McFarlanne lusikhombisa impilo yansuku zonke kaPeter Griffin ezimweni ezivamile, kodwa kusobala ukuthi abanaso isiphetho wonke umuntu angacabanga ngaso. Uma ukuthinta kokuziphatha okunikezwa ngabakwaSimps kungakaze kuqede ukukuthanda, iFamily Guy iluchungechunge lwakho. Okwamanje isesikhathini seshumi nanhlanu futhi ivuselele enye ngaphezulu, yize ibingakaze idlale iminyaka embalwa ngenxa yezinkinga ngeFox, engumnikazi wamalungelo.
Izincomo zochungechunge lwe-B / Gore TV
Ash vs Ububi Ofile
UBruce Campbell kungenzeka angabi ngumlingisi owaziwayo kwabaningi benu. UBruce Campbell uhlanganyele noSam Raimi (umqondisi we-Spiderman) ukuvula i-trilogy yamafilimu we-gore, ngamahlaya nochungechunge lwe-B: Infernal Possession, Terrifyingly Dead ne-The Army of Darkness. Uma ungakaze ubabone futhi uyaluthanda lolu hlobo, kunconywa ukuthi ubabheke.
U-Ash Vs Evil Dead, usikhombisa umlingiswa ophambili walawa mafilimu Ash, adlalwa nguBruce Campbell, eminyakeni engama-30 kamuva. Indaba iqala futhi lapho u-Ash esebenzisa iNecronomicon, noma iNcwadi yabafileyo, ukuze adlale ngothando ngosuku oluthile. USam Raimi, yize engaqondisi izahluko, ungasemva komkhiqizo, ngakho-ke abathandi be-trilogy ye-movie ngeke baphuthelwe noma iyiphi into ebonakalise leyo trilogy. Akudingekile ukubona amafilimu uchungechunge olususelwe kuwo ukujabulela i-Ash Vs Evil Dead, kepha uma uyithanda le timu ingaphezu kokunconywa.
Kusukela kusihlwa kuze kuse: uchungechunge
Lokhu kususwa kwamafilimu nguRobert Rodriguez noQuentin Tarantino, kusikhombisa kwisizini yokuqala konke okwenzeke kule filimu, ukuthi bafike kanjani kwi-Coiled Tit, abangabazalwane abaphambili, umlando wama-vampire awuzungezile. Kumasizini alandelayo, njengamanje kusakazwe amathathu, sibona ukuthi lIndaba yama-vampire iyinkimbinkimbi kakhulu kunokuba ingavela ekuqaleni.
I-Z Nation iwuhlobo lokuphambuka kweThe Walking Dead kodwa ngezinhlamvu zamahlaya we-surreal. Kulo lonke lolu chungechunge, iqembu labantu kufanele lihambise isiguli uZero esikhungweni sikahulumeni ukuze sakhe ikhambi kubo bonke abantu asebephenduke amaZombi.
Ukuncoma / Izincomo Zochungechunge lwe-TV
U-Elliot usebenza njengonjiniyela wokuphepha wenkampani yamakhompyutha encane amaklayenti akhe afaka ibhange elikhulu kunawo wonke e-United States. U-Elliot ubuthwa yi-fsociety, iqembu labaduni aba bafuna ukubhubhisa enamandla kakhulu. Kuze kube manje yonke into ijwayelekile ukube bekungengenxa yokuthi u-Eliot ubhekene nezinkinga eziphathelene nabantu, ukudangala kwemitholampilo nokukhohlisa kwazo zonke izinhlobo. Uma ungumthandi wamakhompiyutha, ungabona ukuthi lolu kungenye yochungechunge olumbalwa, uma kungeyilo lodwa, lapho isihloko sabaduni sikhonjiswa njengoba sinjalo, hhayi njengoba kukhonjisiwe ngochungechunge oluthile oludabukisayo njenge-CSI Cyber.
Umlingisi walolu chungechunge ulingisa abalingiswa abane abahlukene, bonke iziga zomuntu ofanayo. Kulo lonke lolu chungechunge, eselizodlala kuqala isizini yesihlanu, odade bama-clone bazozama ukuthola ukuthi baphila kanjani futhi kanjani, ngoba laba baphikisi abane akuwona kuphela ama-clones asatshalaliswa emhlabeni wonke.
Esinye sezigebengu ebezifunwa kakhulu yi-FBI zilethwe ngombandela wokuthi uzokhuluma kuphela nomenzeli ovele wajoyina i-FBI. URaymond Reddington, ufinyelela esivumelwaneni ne-FBI sokunikela ngezigebengu ezifunwa kakhulu yiziphathimandla ngaphezu kokubazisa ngamasu esizayo ezinye izigebengu. Ezimweni eziningi, uRaymond Reddington ugcina ngokuhlomula ngokuboshwa, kwesinye isikhathi kubangele ukuthi i-FBI ibuze isivumelwano abasenzile.
Uchungechunge lweScorpion lusitshela indaba yeqembu labantu abane Ama-IQ asondele kumaphuzu angama-200 futhi benza ukuba kutholakale kuhulumeni waseMelika ukuxazulula izinkinga ekuboneni kokuqala ezingenaso isixazululo esilula. Lolu chungechunge lususelwa empilweni kaWalter O'brien, ongomunye wabantu abane-IQ ephezulu kakhulu emrekhodini futhi othi wagenca iNASA eneminyaka engu-13 kuphela.
Izilwane baba nolaka futhi akekho owaziyo ukuthi kungani. Izinkomba zokuqala zikhombisa ukuthi imbangela kungaba ukudla okuvela elabhorethri, kepha njengoba uchungechunge luqhubeka sibona ukuthi inkinga ethinta izilwane iyinto eyinkimbinkimbi kangakanani.
I-Prison Break yaqale yakhiwa amasizini ama-4 kulo nyaka enwetshiwe aba yesihlanu lapho amatafula aphenduke khona kusukela manje ngumfowethu omdala ozosiza umfowethu omncane phuma hhayi kuphela ejele, kodwa nasezweni lapho eboshwe khona.
Kungene ezindaweni ezimbi
Nge-Badlands siqhubekela phambili, lapho ngemuva kokubhujiswa kwempucuko umphakathi wesizwe uvele, kubuswa izinduna eziyisikhombisa zempi ezihlala ziphikisana. Lolu chungechunge lusikhombisa indaba yensizwa eyiqhawe elizongena ezindaweni ezihlukene ukuthola izimpendulo.
Izincomo zochungechunge lwama-Comic / Book TV
Ama-Agent kaMarvel we-SHIELD
Olunye lochungechunge oluphumelele kakhulu endaweni yonke ye-Marvel emhlabeni wethelevishini. ISHIELD yinhlangano leyo uzobhekana nezinsongo ezijwayelekile zomhlaba we-Marvel, nezinhlangano zobugebengu ezifana neHydra, eziqondisayo. Kulo lonke lolu chungechunge i-SHIELD izobe iqasha abalingiswa abasha abazobasiza ekulweni nobubi.
Ummeli oyimpumputhe emini, iqhawe ebusuku. Le yimpilo kaMatt Murdock, okuthi yize engaboni, ngenxa yoqeqesho aluthola selokhu aqala ukubona esemncane, ukwazile ukuthuthukisa amakhono adingekayo ukuze amehlo akhe angadingi noma ngasiphi isikhathi ukwazi ukuthi uzungezile . UDaredevil, usekelwe kumahlaya eMarvel futhi kube yimpumelelo yezinkathi ezimbili, ezitholakala kuNetflix, ukuthi isizini yesithathu isivele isayiniwe.
ULuke Cage naye uvela kuMarvel futhi kwakungukuzama okwehlulekile kwenhlangano eyimfihlo ukukhiqiza kabusha isosha eliphelele elazala uCaptain America, okwenza uLuka abe yindoda enamandla angaphezu kwawomuntu nesikhumba esingangeneki. Lolu chungechunge lususelwa kuJessica Jones (naye ovela endaweni yaseMarvel), lapho uLuka Cage evela khona ngezikhathi ezahlukahlukene ekhombisa amakhono akhe.
Ukulungiswa kochungechunge lwenoveli lukaGeorge RR Martin Ingoma Yeqhwa Nomlilo. Leli tulo lisibeka komunye wemibuso eyisikhombisa yezwekazi elisentshonalanga, iWinterfell lapho umbusi walo mbuso ebizwa khona ukuba athathe isikhundla seSandla seNkosi, esizomphoqa ukuba ashiye umhlaba wakhe angene ezweni eliyinkimbinkimbi lobudlelwano imindeni eyisikhombisa ebaluleke kakhulu embusweni. Lolu chungechunge lwe-HBO lube futhi lusaqhubeka ukuba ngomunye wemiklomelo eklonyeliswe kakhulu eminyakeni edlule futhi njengamanje seluzokwethula isizini yalo yesishiyagalombili.
The Dead Ukuhamba
Kanye neGame of Thrones, I-Walking Dead ingelinye lochungechunge olube nempumelelo enkulu kuthelevishini eminyakeni yamuva. Njengoba igama lingasikisela, i-The Walking Dead isitshela indaba yokuhlelwa kokuthi kuphi igciwane liqothule cishe sonke isintu esiphenduke amaZombiKulo lonke lolu chungechunge sibona ukuthi abantu uqobo kwesinye isikhathi bayimbangi yabo eyinhloko yokushaya, hhayi iZombies. I-Walking Dead isuselwa kumakhomikhi kaRobert Kiirkman noTony Moore.
Njengo-The Walking Dead, uRobert Kirkman usemuva kwamahlaya agqugquzele lolu chungechunge olusha lwethelevishini olubizwa nge-Outcast, uchungechunge olusikhombisa impilo kaKyle Barnes, umndeni wakhe onamadimoni kusukela esemncane. Lapho esekhulile, uzozama ukuthola ukuthi yini efihlekile ngemuva kwakho konke lokhu kubonakaliswa okungaphezu kwemvelo okuthinte umndeni wakhe.
I-American Gods yinoveli kaNeil Gaiman eyashicilelwa ngo-2001. Kule ncwadi sitshelwa ngendaba yowayeyisiboshwa okuthiwa nguSombre, indoda ephuma ejele ngemuva kweminyaka emithathu esejele ngecala lokugebenga ibhange kanye nalowo ositshelayo mayelana nokufuna ukuhlangana futhi nonkosikazi wakhe amthandayo, kuze kube uzwa ukuthi ushonile engozini yemoto.
Lolu chungechunge lususelwa kumanoveli weTrilogy of Darkness ngumqondisi uGuillermo del Toro, umqondisi weHellboy, The Hobbit Trilogy, Pan's Labyrinth, Pacific Rim, Cronos ... Indaba iqala nge ukuvela kwendiza egcwele izidumbu, indiza ethwele umthwalo ongaziwa. Kancane kancane, yonke into etholakele ibingenxa yezibungu ezifakwayo ezingena kubantu ukuzilawula noma zidale ukufa, ngokwesinqumo sikaMaster.
Inguqulo Yangempela Ebhalwe phansi noma ebizwa nge-Spanish?
Lonke uchungechunge esikukhombisa lona kulesi sihloko lubizwa ngeSpanishi, okungenani isizini yokuqala, ngoba zisakazwe ngeSpanishi. Kodwa-ke, kukhona abanye abanye abangakadedelwa eSpain futhi okwamanje akubonakali ukuthi kukhona inhloso yokwenza lokho, okungenani ngemuva kwesikhathi esidlulile selokhu saqala ukwenziwa e-United States.
Uma ugcina ubhajwe ochungechungeni, kungenzeka ukuthi ekugcineni ugcine usuyithokozela ngolimi lwayo lwangempela olunemibhalo engezansi, ikakhulu ngobaImvamisa zitholakala isikhathi eside ngaphambi kwenguqulo eqanjiwe. Ekugcineni uyasijwayela nangendlela oqhuba ngayo isiNgisi esincane esingaze sibuhlungu.
Iningi lala ma-series atholakala nge-Netflix, HBO, ne-Amazon Prime Video, ngakho-ke ngeke kube nzima kakhulu ukulandela umkhondo wabo uma sifuna ukumnika ithuba. Bengingangeza olunye uchungechunge, kepha kule ndatshana bengifuna ukukhombisa uchungechunge olungadonsela ukunaka kakhulu emphakathini jikelele, yize ngaphandle kokumbalwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Ukusakaza » Izincomo ezinhle kakhulu zochungechunge lwe-TV
Ungasetha kanjani uhlelo lokubhekwa kwevidiyo yasekhaya ngekhamera yewebhu noma ikhamera ye-IP
I-MOBAG yihhovisi lakho eliphathekayo, ubhaka ohlakaniphile owenzelwe eSpain [BUYEKEZA]